Than Soe Hlaing – လူမျိုးရေး ပြဿနာကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ကြမလဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒါ့အပြင် လူထုကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်ရှိ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ အလားအလာတွေမှာ ဘယ်လောက်တောင် အကောင်းမြင်တယ်၊ မျှော်လင့်ချက်ထားတယ်၊ ယုံကြည်မှု ရှိတယ်။ အစိုးရအပြင် အခြားမဏ္ဍိုင်တွေဖြစ်တဲ့ အတိုက်အခံတွေ၊ သတင်းမီဒီယာတွေ၊ ဘာသာရေးနဲ့ လူမှုရေးအစုအဖွဲ့တွေ အားလုံးနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး အကောင်းဆုံး အဖြေကို ရှာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အခု အရေးအခင်းကနေ မှတ်ကျောက် တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
3 Responses to Than Soe Hlaing – လူမျိုးရေး ပြဿနာကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ကြမလဲ
Nyi Nyi Zaw on June 6, 2012 at 10:17 am
ဒီဆောင်းပါးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တင်ပြပုံကို လေးစားပါတယ်။ ချီးကျူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မှားယွင်းတဲ့ ဖေါ်ပြမှု့တခု ပါရှိနေလို့ ထောက်ပြလိုပါတယ်။
Khine Yae Htat on June 6, 2012 at 10:54 am
Sure, authorities must take actions against those who commit crimes. I don’t support that crimes are coloured by any religions or race.
ko lay on June 6, 2012 at 11:38 am
Good explanation & good Suggestion.
Please you write like this article as much as possible.
This is not the time, everything to blame government.
Open society started, we all people have to take own responsibility.
Of course we have to point out government’s weakness.
At the same time, we have to highlight political parties & public also what they should do.
Please you write some more this kind of articles for other issues with fair attitude.
We need your writing very urgent & important.